गोकर्ण बिष्ट चन्द्र के.सी भन्दा झन्डै दोब्बर मतले अगाडी (बिहान ४:३० बजेको अप्डेट) – Gulminews
Home/निर्वाचन अप्डेट/गोकर्ण बिष्ट चन्द्र के.सी भन्दा झन्डै दोब्बर मतले अगाडी (बिहान ४:३० बजेको अप्डेट)
गोकर्ण बिष्ट चन्द्र के.सी भन्दा झन्डै दोब्बर मतले अगाडी (बिहान ४:३० बजेको अप्डेट)
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ मंसिर २३, शनिबार ०५:०७ मा प्रकाशित
मंसिर २३ । गुल्मीको दुई वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका सचिबद्वयले अग्रता कायम राखेका छन् । गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधी सभामा बामगठबन्दनका तर्फबाट उम्मेदवार नेकपा एमालेका गोकर्ण बिष्टले नेपाली काँग्रेसका चन्द्र के.सीसँगको अग्रता झन्डै दोब्बर पुर्याएका छन् ।
शनिबार बिहान ४:३० बजेको अप्डेट अनुसार बिष्टले १० हजार ६ सय ४ मत ल्याउँदै आफ्नो अग्रतालाई निरन्तरता दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका चन्द्र के.सी भने ५ हजार ४०३ मतका साथ झन्डै आधा मतले पछाडि छन् ।
उता क्षेत्र नं २ मा पनि बाम गठबन्दनकै तर्फबाट उम्मेदवार भनेका नेकपा एमालेका सचिब प्रदिप ज्ञवालिले आफ्नो अग्रता कायमै राखेका छन् । ज्ञवालीले शनिबार बिहान ४:३० बजेसम्म ८ हजार ३ सय १२ मतका साथ नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीलाई झन्डै एक हजर पाँच सय मतले पछाडि परेका छन् । भण्डारीले ६ हजार ८ सय ५८ मत ल्याएका छन् ।
गुल्मीमा प्रतिनिधीसभा तर्फ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारी र नेकपा एमालेका प्रदिप ज्ञवाली तथा क्षेत्र नं. २ मा नेपाली कांग्रेसका चन्द्र के.सी र नेकपा एमालेका गोकर्ण बिष्ट चुनावी भिडन्तमा छन् । कांग्रेसका दुई चन्द्रलाई रा.प्र.पाको समर्थन छ भने एमालेका सचिबद्वय ज्ञवाली र बिष्टलाई माओवादी केन्द्र लगायतका बाम पार्टिहरुको समर्थन छ ।